HUAJING yakanyorova pasi mica upfu hwakagadzirwa kubva kune yakanaka mhando yechisikigo mica chinyorwa Munguva yekugadzira yekuchenesa, kuwacha, kunyorova, kupwanya mukumanikidza kukuru, kuomesa mune yakadzika tembiricha, kuongorora kwakanakisa, inozove yakanaka kwazvo yekuzadza zvicherwa. Yayo yakasarudzika yekugadzira nzira inochengeta mica yemukati pepepa dhizaini, hombe chimiro chiyero, yakakwira index yeanodzora, yakachena kuchena & kubwinya, yakaderera Iron & jecha zvemukati uye zvimwe maindasitiri zvivakwa.
Huajing epurasitiki-giredhi mica upfu, iyo inonyanya kushandiswa kweinjiniya mapurasitiki kuti awedzere kupfugama modulus uye kushanduka. kudzikisa shrinkage .Mumunda wepurasitiki zvishongedzo zvezvigadzirwa zvemagetsi, mushure mekuwedzera mica, ivo vanogona kuve vakanatswa kusanganiswa pamwe nekugadzirwa.
Yakaoma pasi mica upfu hweHuajing inokwikwidza mumutengo uye yakagadzikana muhunhu. Iyo yakachena kuchena mica upfu inogadzirwa nekukuya pasina kuchinja chero yakasikwa chivakwa. Munguva yekugadzirwa kwese, isu tinotora yakazara yakavharirwa yekuzadza system kuti uve nechokwadi chehunhu hwechigadzirwa;